Stencil agba mgbidi na mbụ, jiri ha! | Bezzia
Stencil agba mgbidi na mbụ, jiri ha!
Maria onyekwere | 02/04/2021 18:00 | Emelitere ka 30/03/2021 19:11 | Mee ya n'onwe gị
Enwere ngwaọrụ ndị na-enye anyị ohere gbanwee ọdịdị nke ime ụlọ n'ụzọ dị mfe ma dị ọnụ ala mana ha anaghị amasị anyị nke ukwuu. Stencil maka mgbidi eserese, nke a makwaara dị ka stencil, bụ ihe atụ nke a.
Na stencil maka eserese mgbidi ị nwere ike ịgbanwe ụlọ n'ime awa ole na ole. Ha ga-eme ka ọ dịrị gị mfe ịmepụta usoro ịmegharị na mgbidi nke ga-agbakwunye mmasị na ime ụlọ ahụ. Ma ha ga-enye gị ohere ịmepụta ihe dịpụrụ adịpụ nke na-adọrọ uche gaa n'otu akụkụ. Mụta ihe banyere ndị a!
1 Gịnị bụ stens?
2 Zụta ma ọ bụ mepụta template nke gị
3 Tinye stencil ka agba agba mgbidi
Gịnị bụ stens?
Stencil bụ ndebiri emere site na otu ihe ha na-eje ozi na stampụ motifs n'elu ala site na ịgafe agba site na nkwụsị ndị e mere na ya. Enwere ike ịchọta nkọwa zuru oke na Akwụkwọ ọkọwa okwu nke Royal Spanish Academy:
Site na Bekee. stencil.
1. m Arg., Bol., Chile, C. Rica, Cuba, Méx., Nic., Pan., R. Dom. Na Ven. Specific ihe template maka stencil.
Site lat. extergēre 'hichapụ, dị ọcha'.
1. tr. Eserese stampụ, leta ma ọ bụ ọnụọgụ site na ịgafe agba, yana ngwa kwesịrị ekwesị, site na mbepụ emere na mpempe akwụkwọ.
Zụta ma ọ bụ mepụta template nke gị
N'ahịa ị ga-ahụ ọtụtụ stencil maka agba agba eji ihe plastik mee na i nwere ike iwerekwa ugboro ugboro. Ihe ndebiri nke na-e imitateomi motifs nke taịl nile nke hydraulic, yana ndị nwere geometric ma ọ bụ floral motifs bụ ndị kachasị ewu ewu.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na edoghị anyị ederede ọ bụla? Mgbe ahụ, anyị nwere ike ịmepụta ndebiri nke anyị site na eserese anyị ma ọ bụ ndị ọzọ anyị hụrụ na ntanetị. Maka nke a ị ga-achọ ihe ọmụma bụ isi na njikwa ụfọdụ Mmemme mmemme dị ka Photoshop na ngwa nbipute nke na enye ohere ibiputa na mpempe akwụkwọ plastik. Inwe otu anaghị adịkarị, mana ọ naghị enwekarị nsogbu ịchọta ụlọ ahịa akwụkwọ na obodo anyị.
Chọghị ihe ọkachamara? Ọ bụrụ na okike na nkà bụ ihe ị nwere, ị nwere ike ịmepụta ndebiri nke gị site na iji perforated plastic spacers, ndị anyị ji ahazi akwụkwọ n’ụlọ, na onye na-egbusi ihe nke ọma.
Tinye stencil ka agba agba mgbidi
Ozugbo inwere ihe eji achọ mma gị, oge eruola ịkwadebe agba ahụ ma mee ka aka gị ruru unyi. Ma olee ebe ị na-amalite? Ọ bụrụ na echiche gị bụ ịmeghachi otu ụkpụrụ ahụ n'ụzọ zuru oke na mgbidi niile, ihe ga-adị mma bụ ịdọrọ a akara kwụ ọtọ n’etiti mgbidi ahụ ije ozi dị ka ihe nduzi maka ịmepụta akara mbụ nke ụkpụrụ.
N'ọnọdụ ọ bụla, ozugbo ịhọrọ ebe ị ga-etinye ndebiri ahụ, nzọụkwụ ọzọ ga-abụ rapara ya na mgbidi site n'enyemaka nke obere teepu nkpuchi. Anyị chọrọ iche na tupu ị lezie anya ikpuchi ala na ala ndị ọzọ nwere ike ịba, nri?
Ozugbo edoziri template ahụ, ịnwere ike itinye agba ahụ n'ụzọ dị iche iche. Nwere ike ịcha mgbidi ahụ site na iji agba agba iji nweta otu eserese edo ma ọ bụ tinye agba ahụ site na ịpị ya na sponge iji nweta mmetụta ga-agwụ. Y’oburu n’inwe otutu stenji nke inwere ike rapara na mgbidi, ihe ikuku ikuku nwekwara ike buru ezigbo uzo. Họrọ usoro nke masịrị gị nke kachasị ma ọ bụ nke kachasị dịrị gị mma ma rụọ ọrụ!
Ozugbo etinyere agba ahụ na template mbụ, oge eruola ịkpụcha ya ma debe ya n'ọnọdụ ọhụrụ. Imirikiti stencil eserese mgbidi nwere nkọwa doro anya ka ha kwado ha nke mere na ihe nlereanya ahụ zuru oke, yabụ ị ga-agbaso ihe ndị a.
Gbalia ihichaa stencil ha site n’oge ruo n’oge ma gbanwee teepu nkpuchi iji zere ịdọrọ agba mgbe ị gbanwere stencil ma ọ bụ ọrụ niile ga-emetụta. Ma nweere onwe gị ịlele na usoro ịmeghachi azụ na-echekwa ahịrị kwụ na ntanetị site n'oge ruo n'oge.
Ugbu a ị matara otu esi eji stencil agba agba mgbidi, ị ga-anwa anwa ịgbanwe ihe ndị dị na mgbidi gị na ndị a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Mee ya n'onwe gị » Stencil agba mgbidi na mbụ, jiri ha!
Eco uru nke obere ụlọ
Autbọchị autism ụwa, kedu ihe ọ bụ na otu ha ga esi arụ ọrụ na ọha mmadụ